कसरी एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइविंग इजाजत पत्र प्राप्त गर्न | यात्रा समाचार
छुट्टीमा देश चिन्ने सब भन्दा चाखलाग्दो तरिकाहरू मध्ये एक कारद्वारा हो। यसले हामीलाई हाम्रो गति सेट गर्न अनुमति दिन्छ स्मारकहरू, शहरहरू र स्थानहरूको भ्रमण गर्दा, अर्को रेल वा बसको प्रस्थानको बारेमा सचेत नहुनु जुन हामीलाई हाम्रो मार्गमा अर्को गन्तव्यमा पुग्छ।
विदेशमा सडक यात्राको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र आवश्यक पर्दछ। एक स्पष्ट रूपमा सरल प्रक्रिया तर केहि बोझिल यदि यो अग्रिम योजना गरिएको छैन र हामीलाई यसको अनुरोध गर्न आवश्यकताहरू र यो कसरी गर्ने भन्ने बारे सूचित गरिएको छ। अर्को पोस्टमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं, यसको लागि कहाँ आवेदन गर्ने, यसको मूल्य र अन्य धेरै चीजहरू।
1 अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र के हो?
2 एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइविंग इजाजत पत्रको लागि कसरी आवेदन दिने?
3 एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यकताहरू
4 अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र प्राप्त गर्न मूल्य
5 अनुमति प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
6 के गर्ने यदि अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र हरायो भने?
7 अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको म्याद कहिले सकिन्छ?
8 तपाईंले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र प्राप्त गर्न आवश्यक छ?
9 जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको आवश्यकता छैन?
10 विदेशमा यात्रा बीमा
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र के हो?
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र एक कागजात हो जुन एक देशका नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा विदेशमा कार ड्राइभ गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा ट्राइप्टिचीको रूपमा खैरो कभर छ र यसमा १ of पृष्ठहरू छन् जसमा मालिकको डाटा र अनुमतिहरू जुन उसले स्पेनी, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, इटालियन, जर्मन, रूसी, पोर्तुगाली र अरबीमा देखा पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको वैधता अवधि एक बर्ष छ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइविंग इजाजत पत्रको लागि कसरी आवेदन दिने?
स्पेनमा DGT सँग कुनै अफिसमा व्यक्तिगत रूपमा जानको लागि पूर्व भेटघाट गर्नु आवश्यक छ र यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ड्राईभिंग इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्छ। सामान्यतया उनीहरुसँग अपोइन्टमेन्ट लिन अधिक समय लाग्दैन, अधिकतम दुई हप्ता, तर तपाईले यो प्रक्रिया अघि नै योजना गर्नुपर्दछ।
यदि तपाईं DGT अफिस मध्ये कुनै एक व्यक्तिमा व्यक्तिगत रूपमा जान सक्नुहुन्न, जब तपाईं अपोइन्टमेन्ट अनलाइन गर्नुहुन्छ, तपाईंले भर्खर भर्खरै आफ्ना विवरणहरू र तपाईंको प्रतिनिधिको फाराम भर्नु पर्छ ताकि कोही तपाईंको लागि प्रक्रियाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दछ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यकताहरू
एक मान्य स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेन्स छ
तपाईंको मूल मान्य आईडी, राहदानी वा निवास कार्ड ल्याउनुहोस्
तपाईंको मान्य ड्राइविंग इजाजतपत्रको फोटोकपी
हालको passport२ × २ mm एमएमको पासपोर्ट फोटो
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको लागि पूर्ण फाराम।
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र प्राप्त गर्न मूल्य
प्रक्रियाको मूल्य १०.२० युरो हो त्यो तीन तरिकामा तिर्न सकिन्छ: DGT वेबसाइटमा अनलाइन शुल्क तिर्ने, ट्राफिक हेडक्वार्टरमा आफै वा तपाईंको बैंकमा। तपाईं DGT कार्यालयहरूमा नगद संग भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न।
अनुमति प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
यो ड्राइभरहरूको सबैभन्दा सामान्य शंकाहरू मध्ये एक हो तर सत्य यो हो कि यसले केही मिनेटहरू भन्दा बढी लिदैन। सबै कागजातहरू प्रस्तुत भइसकेपछि र शुल्कहरू तिर्ने बित्तिकै ट्राफिकले तुरून्तै अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र जारी गर्नेछ।
के गर्ने यदि अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र हरायो भने?
यदि तपाईंको अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र हराएको छ वा चोरी भएको छ भने विदेशमा यात्रा गर्दा, तपाईं नक्कल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र स्पेनी वाणिज्य दूतावासमा गएर नवीकरण पनि।
अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको म्याद कहिले सकिन्छ?
मैले माथि भनें, वैधताको अवधि एक बर्ष हो र यसलाई विदेशमा प्रयोग गर्न सक्षम हुन यसलाई स्प्यानिश कार्डसँगै बोक्नु आवश्यक छ यदि अधिकारीहरूले अनुरोध गरेमा।
तपाईंले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजत पत्र प्राप्त गर्न आवश्यक छ?
यात्राको तयारी गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन अघि गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईंलाई वास्तवमै यो आवश्यक छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नु हो, किनकि यस्तो अवस्था सधैं हुँदैन। उदाहरण को लागी, यूरोपीयन संघ वा यूरोपीयन आर्थिक क्षेत्र (Liechtentein, आइसल्याण्ड वा नर्वे) को सदस्य देशहरु को माध्यम बाट ड्राइभ गर्न तपाईलाई कुनै विशेष अनुमतिको आवश्यक पर्दैन।
यूरोपियन महाद्वीप बाहिर, हामी थुप्रै देशहरू पनि गणना गर्न सक्छौं जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र आवश्यक छैन र स्पेनी इजाजतपत्र पर्याप्त छ, जसमध्ये धेरै ल्याटिन अमेरिकामा छन्।
त्यस्तै गरी, हामीसँग केहि देशहरू छन् जुन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ड्राईभिंग सन्धिमा सामेल छैन, जस्तै चीन, त्यसैले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्र वैध छैन किनकि यसको आफ्नै आवश्यकताहरू छन्।
जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिंग इजाजतपत्रको आवश्यकता छैन?
जर्मनी, अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोलिभिया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, साइप्रस, कोलम्बिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, इक्वेडर, अल साल्भाडोर, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, इस्टोनिया, फिलिपिन्स, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, ग्रीस, ग्वाटेमाला, हंगेरी, आयरल्यान्ड , आइसल्याण्ड, इटाली, लाट्भिया, लिक्टेनस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, म्यासेडोनिया, माल्टा, मोरक्को, निकारागुआ, नर्वे, नेदरल्याण्ड, पनामा, पराग्वे, पेरु, पोल्याण्ड, पोर्तुगाल, युनाइटेड किंगडम, चेक गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक, रोमानिया, सर्बिया, स्वीडेन, टर्की, ट्युनिसिया, युक्रेन, उरुग्वे र भेनेजुएला।
विदेशमा यात्रा बीमा
विदेशमा यात्राको योजनामा ​​जब हामी कार चलाउन गइरहेका छौं, हाम्रो बीमा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ ताकि उनीहरूले हामीलाई तपाईंसँग के कभरेज छ भनेर बताउन सक्दछन्। यदि तपाईं युरोपेली युनियनको माध्यमबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो लागु हो भनेर प्रमाणित गर्न नीति र बीमा भुक्तानीको रसीद ल्याउन बिर्सनु बिना नै बीमाको लागि पर्याप्त हुनेछ।
यदि हाम्रो गन्तव्य यूरोपीय संघ भन्दा बाहिर छ भने, बीमा र भुक्तानीको प्रमाणको अतिरिक्त, ग्रीन कार्ड पनि भनिने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ। यो कागजात बीमा कम्पनीबाट अनुरोध गरिएको हुनुपर्दछ र हामीसँग Obणीको नागरिक दायित्व बीमा छ भन्ने प्रमाणित गर्न कार्य गर्दछ। यदि अनुरोध गरिएको छैन भने, हामीले गन्तव्य मुलुक पुग्नु अघि बोर्डर बीमा लिनु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइविंग इजाजत पत्र कसरी पाउने